यस कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २ मा हिमालको जित पक्का पक्की -
यस कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २ मा हिमालको जित पक्का पक्की
E Naya Khabar Reporter २०७४ मंसिर १७ गते आइतवार	| फिचर
उदयपुर, मंसिर १७
उदयपुरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ कम्युनिष्टहरुको लालकिल्ला नै हो । यही लालकिल्लामा आगमी मंसिर २४ गते हुने निर्वाचनमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार सुरेश कुमार राई हिमाल भारी मतले जित्दै छन । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका राईले जित्ने प्रष्टै विविध आधारहरु भएको सर्वसाधरणनै दावी गर्दछन । चार गाँउपालिका र एक नगरपालिका रहेको यस प्रतिनिधिसभा निार्वचन क्षेत्र २ मा गाँउपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको नगरप्रमुखको मत हेर्दा बाम गठबन्धन बलियो छ । त्यसो भएकाले राईको जितमा कुनै शंका छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ पर्ने ताप्ली कटारी नगरपालिकामा मात्र बाम गठबन्धन १६ हजार ०३१ छ भने काङग्रेस ६ हजार ९१५ छ । काँग्रेसले बामलाई जित्ने कुनै ठाँउनै छैन । यता २ कै ख मा पर्ने सुनकोसी, उदयपुरगढी रौतामाई गाँउपालिकामा पनि बाम गठबन्धननै धेरै छ । जाहा गठबन्धन १४ हजार २८७, काङग्रेस ६ हजार २० छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा २ मा गठबन्धन ३० हजार ३१८ र काङग्रेस १२ हजार ९ सय ३५ मत छ । यो गापाका अध्यक्ष र नगरप्रमुखले पाएको मत हो । यही आधारमा मत खस्दा बाम गठबन्धन बलियो छ । यस कारण पनि प्रष्ट रुपमा उम्मेदवार राईको जित पक्का पक्की छ ।
उम्मेदवार राईका जित्ने कारण यस प्रकार छन
बाम गठबन्धनबाट उम्मेदार बनेका राईले आगमी ५ बर्ष यस निर्वाचन क्षेत्र भित्र पर्ने गाँउपालिका र नगरपाकिलाका वडाहरुमा गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, विद्युत, खानेपानी पक्की रोड पु¥याउने अठोट लिएका छन । उदयपुरका नेता मध्ये बोल्ने गर्ने नेतामा पर्दछन । यस निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने तावा, कमला, ककुर खोला लगायतका ठुला नदी नियत्रन्त्रणमा गूरु योजनामा समेत बनाउने राइको बाचा छ । वेतेनी भन्याँङ, उदयपुरगढी, रौता, माझखर्क क्षेत्रलाई एक नम्वर प्रदेशको पर्यटकिइ क्षेत्र बनाउने घोषणा समेत गरेका छन । उदयपुरका लोकप्रिय नेता समेत रहेका राईले त्यस क्षेत्रको खेलकुद क्षेत्रको बिकासमा पनि कम योगदान पुर्याएका छैनन । यता तत्कालिन नेकपा माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धको आधार इलाका समेत हरेकाले माओवादीको पकड क्षेत्र मानिन्छन । उदयपुरको भुगोलमा जनयुद्ध छेड्ने यस क्षेत्रका जनताले माओवादीभन्दा अरु रोज्ने गरेका छैनन, अर्थात कम्युनिष्ट भन्दा अरुलाई भोट हाल्ने गरेका छैनन । ०७० सालमा नेपाली काँग्रेसले कटारी नगरपालिका एमालेमा रहेको विवादले मात्र भाग्य चम्काएको थियो । यता माओवादीमा आएको विभाजन पनि कार्कीलाई जित्ने आधार बनेको थियो । ०७० भन्दा अगाडीका विभिन्न चुनावमा कम्युनिष्टकै जित हुँदै आएको छ । फेरि हर्देनी, मयाँखु, लेखानी लगायतका क्षेत्रलाई अदुवाको पकेट क्षेत्र घोषणा पनि माओवादी सरकारले गरेको हो । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने उम्मेदवार राईको विशेष योजना छ । यता लिम्पाटा, ओख्ले, रुपाटार क्षेत्रमा सुनतलाको जोन क्षेत्र घोषणा भएर काम सुरु भएको छ । जहाँ अहिले एक नम्वर प्रदेशमा पर्ने उदयपुरको सुन्ताला उत्पादन भुमि प्रामाणित हुँदै छ । त्यो पनि माओवादीकै पहलमा भएको प्रष्ट छ । त्यसमा मुख्य पहल भने राईले नै गरेका हुन । ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचचित बनेका हालका नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट व्युरो सदस्य तथा माओवादी केन्द्र उदयपुरका इन्चार्ज मोहनबहादु खत्री दिपकको पालामा यस क्षेत्रका ग्रामिण सडक निर्माण भएका हुन । ‘अधिकाँस सडक माओवादीले निर्माण गरेका हुन,’ खत्रीले भने, ‘यस क्षेत्रमा काँग्रेसीलेभन्दा कम्युनिष्टले धेरै विकास गरेको प्रष्ट रुपमा जनताले देखेका छन ।’ बाम गठवन्धनको देशब्यापी उम्मेद्वारहरु बिजयी भई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमत पुराउन र स्थीर सरकार र राजनितिक स्थाईत्व कायम हुने पक्का पक्की छ । दुइ तिहाई वा बहुमतको तीनै तहको सरकारबाट एकीकृत योजना निर्माण गर्ने राईको उद्घोष छ । आर्थिक सम्बृद्धिको राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।
कार्कीलाई काँग्रेसीनै घातक बने
काँग्रेसीलाई काँग्रेसीनै घातक बनेकाले पनि उम्मेदवार राईको जित निश्चित छ । नेपाली काँग्रेस उदयपुरका वर्तमान जिल्ला सचिव रामकुमार राई बाम गठबन्धनमा प्रवेश गरे । राई बाम गठबन्धनमा छिरेपछि उदयपुरमा काँग्रेस दुईधारमा विभाजित भएको छ । सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने टिकट नपाएको झोकमा जिल्ला सचिव राई काँग्रेसका उम्मेदवार नारायण कार्की हराउ अभियानमा मात्र छैनन उदयपुरे काँग्रेसनै हराउन जुटेका छन । सोही क्षेत्रका निवासी राई अहिले उदयपुरका काँग्रेस हराउन एउटा टोली बनाएर लागि परेका छन । ‘मलाई केही सिमिति काँग्रेसीहरुले घेराबन्दीमा पारे, काँग्रेसमा ३ दशक राजनीति गरें, मेरो मुल्यँकन भएन ।’ राईले भने, ‘मेरो योजनाको मुख्य काम कार्की हराउनु हो ।’ ०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन कटारी गाविसको गाविस अध्यक्ष जितेका थिए ।
को हुन बाम गठबन्धनका राई ?
बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य सुरेशकुमार राई हिमाल हुन । राई माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य तथा एक नम्बर प्रदेशको कार्यालय सदस्य हुन । उनलेको जन्म २०३२ सालको माघ २२ गते उदयपुरको रामपुर ठोक्सिलामा भएको हो । उनले स्नातक तहसम्म अध्ययन पूरा गरेका छन । २०४८ सालमा अखिलको प्रारम्भिक कमिटीको सदस्यता लिंदै राजनीतिक क्षेत्रमा राई प्रवेश गरेका हुन । तर एक वर्ष नपुग्दै २०४९ सालमा खम्बुवान मुक्ति मोर्चाको सदस्यता लिए । २०५३ सालमा खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको क्षेत्रीय सदस्य भए । २०५५ सालमा खम्वुवानले माओवादीसँग एकता गरेसँगै राई पनि माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भए । २०६० सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बने । राईले त्यही वर्ष क्षेत्रीय इन्चार्ज र पूर्वी कमाण्डको जिम्मेवारी पाए । २०७० सालमा उदयपुर क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका सुरेश पराजित भए । त्यतिबेला यो क्षेत्रमा एमालेले जितेको थियो । अहिले भने उनि एमालेसँगकै गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छन । त्यो पनि माओवादी जनयुद्धको आधार इलाकाको रुपमा परिचित क्षेत्रमा । राईलाई माओवादी जनयुद्धमा सेल्टर लिएर बसेको आधार इलाकाले पक्कै साथ दिने आँकलन गरिएको छ । जनयुद्धकै समयमा त्यस क्षेत्रमा लोकप्रिय नेता बनेका राईले यस पटक ४ हजारभन्दा बढी मतले जित्ने बताइन्छ ।
323 पटक हेरिएकाे
पछिल्लाे - रुकुममा माके नेकाबीच झड्प
अघिल्लाे - कैलाली निर्वाचन क्षेत्र २ को (क) र (ख) मा वाम गठबन्धन विजयी
उदयपुरको पहाडी क्षेत्र लघु विद्युतको भरमा
उदयपुर, बैशाख १० उदयपुरको पहाडी क्षेत्र लघु विद्युतको भरमा उज्यालो भएको छ...
पोखरा, पुस २७ कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशको राजधानी...
उदयपुर, पुस १० उदयपुरको गाईघाट र खोटाङको दिक्तेल सडक खण्डको सुनकोसी नदीमा...
धादिङ ३८ किलो गाँजाको धुलोसहित एकजना पक्राउ
लुकाइछिपाइ वीरगञ्जतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका वडा नं...
संसद भवनका नयाँ ६७ सदस्यहरु
केही दिनअघि दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि...
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र २ को (क) र (ख) मा वाम गठबन्धन विजयी
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा (क) र (ख)को प्रदेशसभा सदस्यमा...